Samsung dia mamorona efijery tsy mety vaky izay mifaninana amin'i Gorilla Glass | Androidsis
Eder Ferreño | | Samsung
Ny ankamaroan'ny telefaona ankehitriny dia mampiasa Gorilla Glass ho fiarovana ny efijery. Fepetra tsara ity, izay matetika miasa mba hisorohana ny fahasimban'ny efijery tsy hikororosy na hametraka ilay fitaovana. nyNa dia toa te hanolotra safidy hafa aza i Samsung, ary noho izany dia manolotra ny Panel Unbreakable azy ireo, izay efa voamarina tany Amerika.
Efa manana angon-drakitra vitsivitsy antenaina ho famaritana an'ity tontonana Samsung tsy vaky ity izahay. Ny marina dia mamela ny mpampiasa hanana fahatsapana tena tsara izy ireo, ary mampanantena ny ho ambony noho ny Gorilla Glass 6. Noho izany dia hahaliana ny mahita raha misy marika mampiasa ity rafitra ity.
Ireo fizarana ireo dia efa nandalo fitsapana isan-karazany. Misaotra an'io, fantatra ny fisian'ilay efijery Samsung vaovao afaka milatsaka in-26 misesy miaraka amin'ny haavony 1,2 metatra mandra-pahatapiny. Mikapoka ny Gorilla Glass 6 io, izay tapaka taorian'ny 15 nilatsaka nisesy.
Ankoatr'izay, nandalo fitsapana sarotra kokoa ihany koa izy io mazàna. Araka ny mahazaka mari-pana tafahoatra ary mitete hatramin'ny 1,8 metatra nefa tsy tapaka. Noho izany Samsung dia manolotra safidy hafa izay misongadina amin'ny fanoherana fatratra azy amin'ny karazana toe-javatra rehetra. Filokana azo antoka fa miteraka fahalianana be eo amin'ny tsena.
Ny marika Koreana dia nahavita namorona tontonana OLED miaraka amin'ireo toetra ireo, izay miavaka amin'ny lanjany maivana koa. Ka tsy hahatonga ny telefaona mavesatra noho izany. Ary ity dia zavatra mahaliana rehefa mivarotra an'ireny takelaka ireny amin'ny marika hafa.
Amin'izao fotoana izao dia tsy manana angon-drakitra momba ny fahatongavany eny an-tsena isika. Tokony ho ela anefa izany tena azo inoana fa hatramin'ny taona 2019 dia tsy hahita telefaona Samsung isika ampiasao eo amin'ny efijeryo ity teknolojia ity. Hihaino tsara izay lazain'ny marika momba izany izahay. Raha ny filazan'ny orinasa dia tsy ho an'ny smartphone fotsiny no hampiasana azy ireo, ho hitantsika amin'ny fitaovana hafa ihany koa izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Samsung dia manolotra ny efijery tsy voavakiny
Ny tetika farany tsara indrindra ho an'ny Huawei P20 Pro